I-Starlink Satellites isusa i-Intanethi enentambo | TeraNews.net
Iisathelayithi ze-Starlink zishenxisa i-intanethi enentambo
umbhali UKravetz Pavel Papashwe ngomhla 21.03.2021
Wonke umntu owahleka uluvo luka-Elon Musk lokuhambisa inethiwekhi ye-Intanethi kwiPlanethi yoMhlaba kungekudala uza kuwathatha amazwi abo. Sele kuvavanyo lwe-Beta, kwacaca ukuba kungekudala i-Starlink satellite izakuphelisa i-Intanethi. Ewe ubuchwephesha obungenazingcingo abuyi kuba nakho ukukhuphisana ngokukhanya. Kodwa iinethiwekhi ezindala zobhedu ziya kutshintshwa ngonqakrazo olunye lweminwe.
I-satellite ye-Starlink-itekhnoloji yesithuba senkulungwane yama-21
Eyona ngxaki iphambili kuwo onke amajelo esathelayithi kukulibazisa ukuhanjiswa kweepakethi phakathi komthombo kunye nomamkeli wesiginali. UViasat wayejongwa njengenkokeli ekusebenzeni phambi kweStarlink. I-Intanethi yesathelayithi inokukhawulezisa iye kwi-100 megabits ngomzuzwana, kodwa ngolibaziseko lwe-590-620 millisecond.
Ngeesathelayithi zeSpaceX kumjikelezo osezantsi woMhlaba, iprojekthi ye-Starlink ikwazile ukunciphisa ngokubonakalayo oku kulibaziseka kunxibelelwano olungalunganga ukuya kwi-33ms. Uninzi lwababoneleli bomhlaba be-3G kunye ne-4G abakakulungelanga ukuhambisa ezo ziphumo. Kwaye apha - isithuba seesathelayithi. Vumela isantya sika-Elon Musk ngelixa ubambekile kwii-megabits ezingama-300 ngomzuzwana. Kodwa impendulo iyamangalisa.
Athini amathemba e-Starlink satellite ye-Intanethi
Amabhongo ka-Elon Musk ayamangalisa. I-American philanthropist sele ibhengeze ngokusesikweni isantya esicwangcisiweyo se-10 Gbps. Ngenxa yenyani yokuba u-bilionea engawaphosi amagama emoyeni, umsebenzi uya kumiliselwa kungekudala.
Ngoku ngexabiso leenkonzo. Iseti yezixhobo zokuvavanya i-satellite Star Starlink sele ikhona ukuba iyathengiswa. Ingathengwa e-US nase Canada nge $ 499. Ikhithi ibandakanya umzila, isiphelo sendlela kunye nezixhobo ezinyukayo. Imali yokubhalisela eMntla Melika yi- $ 99 ngenyanga (ijelo elingenamda). Le nkonzo ikwafumaneka eNgilane - amaxabiso ngeeponti: 439 kunye nama-89 ngokwahlukeneyo.
Ababhalisi abangama-10 sele bethathe inxaxheba kuvavanyo lwe-Intanethi ye-Starlink. Ngapha koko, aba banikezeli abambalwa abasemhlabeni abasele belahlekelwe ngabathengi abaninzi. Kwaye eli nani lonyuka kakhulu. Kungekudala, kwihlabathi liphela, siza kubona izithembiso zokwazisa ngomnyama ezivela kubaboneleli abathembisa ngezaphulelo kubathengi babo. Usuku alukude xa isibini esigqwethekileyo kunye nefiber optic ziya kuphinda isiphelo somnxeba wasemhlabeni. Ukuba ixabiso lanele, uyakuhlala ekhona umthengi.
I-ASUS ROG Strix GS-AX5400 - umzila onamandla okudlala
Izitshixo zetorque - iintlobo, injongo, indlela yokukhetha
Yintoni "ikhaya elihlakaniphile" - ngubani olifunayo kwaye ngoba